Enwere oge ụfọdụ mgbe m gụrụ nchọta akọwapụtara na igwe mmadụ ma ọ bụ mpaghara ala nke m na-asụ ude ntakịrị. Anaghị m ekwu na akụkọ a na NewsCred abụghị ihe dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka ha buru n'uche, mana ekwenyere m na anyị na-agakarị izugbe data ma mgbe ụfọdụ na-abịa nkwubi okwu na-ezighi ezi. M na-ajụkarị mmadụ, ị ga - achọ iru ndị 10,000 nwere ọnụego nzaghachi 1% ma ọ bụ mmadụ 500 nwere 25%
Dị ka WordPress nwere ahịa usoro njikwa ọdịnaya, ọ ka na-achọ ihe owuwu siri ike, mmezi na-aga n'ihu, na nnukwu ndị otu mmepe iji wuo isiokwu ma ọ bụ ngwa mgbakwunye nke na-eme ka ọ baara gị uru. Anaghị m anwa ịmelata ọ bụ mgbanwe dị ịtụnanya, mana ohere onye ọrụ azụmaahịa na-edebanye ma wuo ebe nrụọrụ weebụ mara mma ga-arụ ọrụ. Nakwa, nhazi nke weebụsaịtị nke mejupụtara a